မိသားစုရဲ့ဝန်ကိုထမ်းရင်း ဝါသနာပါရာ ဂီတခရီးလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းဖို့ကြိုးစားနေသူလေးကတော့ မင်းZ ပါ။ မင်းZ ကိုတော့ Covid-19 ကာလ အဆိုတော်တွေကစတင်လိုက်တဲ့ Rap Challenge မှာ သူ့ဘဝရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Rap ရွတ်ခဲ့ရာမှ ပရိသတ်တွေစတင် သတိထားမိခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ သူ့နောက်မှာ သူစောင့်ရှောက်ပေးနေရတဲ့မိသားစုက ရှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သီချင်းစာသားလေးကတော့ ပရိသတ်ရင်ကို ထိစေခဲ့ပြီး ဝါသနာရှင်တွေကို ဖေးမကူညီတတ်သူယုန်လေးကတော့ မင်းZ ကိုအကူညီပေးကာ လက်ကမ်းကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ယုန်လေး၊မင်းZ နဲ့ကျော်စွာတို့ပေါင်းပြီး “ဝမ်းစာ” သီချင်းလေးကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး ကြည့်ရှူအားပေးသူ ငါးနာရီအတွင်း တစ်သန်းရရှိခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝမ်းစာသီချင်းတုန်းကတော့ Stay Home ကာလမို့ မင်းZ ကိုမန္တလေးမြို့ကမှာပဲ အသံသွင်းစေခဲ့ပြီး အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ မင်းZ တစ်ယောက် ရန်ကုန်မြို့ကိုလာပြီး သီချင်းသွင်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်လာနေပြီဖြစ်တဲ့ မင်းZ နဲ့ပတ်သက်ပြီး “ကြိုဆိုပါတယ် ညီလေးရေ . ရန်ကုန်ကိုလာဖို့နိုင်ငံခြား သွားသလို မိဘတွေ အလေးထားပြီးလေဆိပ်အထိ မိသားစုတွေ လိုက်ပို့ပေးတာတွေတော့ ပိုပြီးပီတိဖြစ်ပါတယ် . စိတ်ကူး သီချင်းလေးကို အကောင်ထည်ဖို့ Min Z တစ်ယောက် ရန်ကုန်လာပါပြီ . ဆေးစာတွေ ထောက်ခံစာတွေ အကုန်ယူပြီးတရားဝင်လာတာပါ ခင်များ . ငါတို့ ညီအစ်ကိုတွေ စိတ်ကူး တွေအကုန် အကောင်ထည်ဖော်ကြစို့ ” ဆိုပြီးယုန်လေးကတော့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပြီး
မင်းZ ကတော့ လေဆိပ်ကပုံလေးနဲ့အတူ “အမေ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တာ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတော့စိတ်မချလို့တဲ့… မှာလိုက်တာတွေလည်းစုံနေပါရော ကိုယုန်လေးဖို့တဲ့ လေဆိပ်ရောက်မှ ဘယ်ကထွက်လာမှန်းမသိဖူး… ထိုးမုန့်တွေ အဖေက လည်း ဆရာစကားကိုနားထောင်တဲ့…ကျွန်တော်တို့ညီအကို(၃) ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးလေး ပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးခွင့်ရတော့မှာပေါ့ ဗျာ ” ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… ပထမဆုံးအကြိမ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို လာမယ့် မင်းZ တစ်ယောက်တော့ ရန်ခုန်နေလောက်ပြီထင်ပါရဲ့နော်။ စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ သုံးယောက်ပေါင်းဖန်တီးကြဦးမယ့် “စိတ်ကူး” သီချင်းလေးထွက်လာရင် အားပေးကြဖို့ အသင့်ပဲမလား။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသားမီးမီးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်များ
February 21, 2020 February 21, 2020 Cele Family
ကိုဗစ်ကြောင့် စုထားတဲ့ ငွေတွေလည်း ကုန်ပြီလို့ ဆိုလာတဲ့ လူရွှင်တော်ကံပွင့်
September 29, 2020 Cele Family